हसुलिया – कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–४ ‘के गाउँ’ पश्चिम टोलकी श्यामलाली चौधरी गोलाप्रथामार्फत गएको माघ महिनामा भलमन्सा (गाउँ प्रमुख) मा चुनिन् ।
पश्चिम तराईको थारु समुदायमा हरेक वर्ष माघ महिनामा हुुने माघी डेवानी कार्यक्रममा भलमन्सा बन्ने चिठ्ठा उनकै हातमा परेपछि गाउँको जिम्मेवारी उनकै काँधमै थपियो ।
श्यामलालीका पति कामको शिलशिलामा भारत पसेका थिए । चुल्हो चौकोदेखि छोराछोरीको पालनपोषणसम्म घरको पूरै जिम्मेवारी उनकै काँधमा थियो । त्यसमाथि भलमन्सा बन्ने चिठ्ठाले बोझमाथि बोझ थपियो । तर उनले इन्कार गरिनन् । सहर्ष स्वीकार गरिन् ।
‘सदियौंदेखिको नियम पनि पालना गर्नैपर्‍यो । जे परे पर्ला भनेर भलमन्साको जिम्मेवारी पनि सम्हालें,’ उनले भनिन्, ‘तर समाजमा महिलालाई चुनौती नै चुनौती छ ।’ विकासका कार्यमा गाउँलेलाई परिचालन गर्दा महिलालाई नटेर्ने गरेको उनले अनुभव सुनाइन् ।
भलमन्साको जिम्मेवारी बहन गरेयता उनले समाजमा हुने जन्म, मृत्यु र विवाहब्रतलगायत सामाजिक गतिविधि र सडक, पुल पुलेसो निर्माणको कार्यमा अगुुवाइ गर्दै आएकी छिन् भने सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग आफ्नो टोलको विकासको लागि बजेट तथा कार्यक्रम माग गर्दै आएकी छिन् । उनी आफ्नो टोलको ३७ घरधुरीको नेतृत्व गर्दै आएकी छिन् ।
हालै वडा कार्यालयमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा वडाध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै श्यामलालीले भनिन्, ‘अरु टोलका सबै सडक ग्राभेल छन् तर हाम्रो टोलमा किन छैन अध्यक्षज्यू ? वर्षात्मा हिलाम्मे, वैशाखमा धुलाम्मे हुन्छ । ग्राबेलको व्यवस्था होस् ।’
कैलारी गाउँपालिका–४ ‘के गाउँ’ मनेहरा टोलकी सटनी चौधरीले पनि चिठ्ठामार्फत भल्मन्साको जिम्मेवारी पाइन् । गाउँको नेतृत्व गर्नु चानचुने काम नभएको बताउँदै उनले महिला भएकै कारण धेरैले आफूलाई नटेरेपनि हालसम्म सबैलाई मिलाएर लगेको अनुभव सुनाइन् ।
‘समाज अझै पनि महिलाको नेतृत्वमा काम गर्न रुचाउँदैनन् । जसले गर्दा हिनताबोध पनि हुुन्छ । तर पुरुषले गर्न सक्ने महिलाले किन गर्न नसक्ने ? भन्ने सोचले काममा लाग्न अभिप्रेरित गर्छ,’ उनले अगाडि थपिन् ।
आफ्नो टोलको ३५ घरधुरीको नेतृत्व गर्दै आएकी उनले मौका मिले आउँदो दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत भाग लिने बताउन थालेकी छिन् । भलमन्सा तथा बरघर प्रथा थारु समुदायमा चल्दै आएको परम्परागत शासन पद्धति नै हो । प्रजातान्त्रिक विधिमार्फत सञ्चालन हुने पद्धतिको नेतृत्वमा पछिल्लो समय महिला मात्रै होइन, थारु बस्तीमा गैरथारु भलमन्सा नेतृत्व गर्दै आएका छन् । जसलाई समाज रुपान्तरणको प्रक्रियाको रुपमा लिनुपर्ने बताइन्छ ।
कैैलारी गाउँपालिका–४ ‘के गाउँ’ घुम्टी टोलका भलमन्सा तीर्थप्रसाद नेपाल भलमन्सामार्फत सामाजिक गतिविधि गर्न निकै सजिलो भएको बताउँछन् । गाउँ टोललाई नमूना बनाउन भलमन्साको सबैभन्दा ठूलो भूमिका रहने गरेको उनको भनाई छ ।
भलमन्सा नेपालले आफ्नो टोलको करीब १ सय घरधुरीको नेतृत्व मात्रै गरेका छैनन्, यतिबेला वडा नम्बर ४ मा रहेका १९ जना भलमन्साको नेतृत्व समेत गर्दै आएको बताउँछन् ।
विकास निर्माणको जिम्मेवारी भलमन्साकै !
यतिबेला ग्रामीण भेगमा विकासका कार्य धमाधम भइरहेका छन् । सडक निर्माण, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायत सार्वजनिक निकायको भौतिक संरचना निर्माण, खानेपानी, विद्युत् विस्तार लगायतका कार्य धमाधम भइरहेका छन् । थारु बाहुलबाहेक क्षेत्रमा कतै टेन्डर तथा कतै उपभोक्ता समितिमार्फत विकासका कार्य भइरहेका छन् । तर थारु बस्तीमा हुने अधिकांश विकास निर्माणका गतिविधि भने भलमन्साकै नेतृत्वमा हुुँदै आएको बताइन्छ ।
कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले गाउँपालिकास्थित सबै विकास निर्माणका गतिविधिमा भलमन्साकै भूमिका रहने गरेको बताए । भलमन्साको जिम्मेवारीकै कारण जनश्रमदान गराउनेदेखि लिएर विकास निर्माणमा जनसहभागिता गराउने, योजना छिटोछरिटो ढंगले अगाडि बढाउनमा निकै सहजता हुुँदै आएको अध्यक्ष चौधरीको भनाई छ ।